सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक घरदैलोमा ! - Rastrakokhabar
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक घरदैलोमा !
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:४०
विद्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा यस खालको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । यो वर्गका विद्यार्थी वैकल्पिक विधिका रूपमा सञ्चालित अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनको दायरामा समेटिन सकेका छैनन् । वैकल्पिक विधिमा ती विद्यार्थी सहभागी हुन नसक्दा उनीहरूको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित नहुने र यसबाट ती वर्गको शैक्षिक सत्र खेर जान सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी शिक्षक परिचालनको कार्यक्रम अघि सारिएको हो । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्दा शिक्षा सम्बन्धी तालिम प्राप्त शिक्षक परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने सरकारी तयारी छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
Previous Post	आज पनि देशका धेरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना
Next Post	‘दुई वर्षभित्र बृद्धभत्ता पाँच हजार’